Vanhu Zana Kusanganisira Vana Vogara Pedyo neMugwagwa Mushure Mekudzingwa Papurazi
Vana vave kugara pedyo nemugwagwa kuHurungwe
Vamwe vagari vekuHurungwe kusanganisira rimwe svikoro vapedza mwedzi mitanhatu vachigara pedyo nemugwagwa sezvo hurumende yakundikana kuvagarisa patsva mushure mekuvadzinga pane rimwe purazi nechisimba.
Svikiro redunhu reVhuti, VaTapfumaneyi Katemanyoka nemhuri dzinodarika zana vakabviswa papurazi reWaterloo gore rapera muna Gumiguru zvichinzi vagere panzvimbo iyi zvisiri pamutemo nematare.
Mhuri idzi dzinosvika makumi mashanu dzichiri kugara padivi pemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu mushure mekunge dzabviswa papurazi reWaterloo iro rainge ranzi ndera VaJames Chigwedere nematare.
Vanhu ava vanoti pavakabviswa pamwe nedzimwe mhuri zana vakateverwa pamugwagwa pavainge vakandwa nechikonzi pamwe nemapurisa vachinzi ngavaende kure makiromita gumi vachityirwa kuti vangadzokere papurazi ravainge vabviswa.
Mumwe wevachiri kugara pamugwagwa ndiAmai Emma Munyaradzi vanoti havana kwekuenda uye nehurumende iri kushayawo kwekuvaendesa.
Amai Munyaradzi avo vakasungwa nemhosva yekunzi vakarova mupurisa apo vaibviswa papurazi vanoti pamugwagwa pavachiri kugara vane dambudziko remvura, zvekudya uye vana vavo havasi kuenda kubasa.
Mumwe agere pamugwagwa ndiAmai Fatima Adam vanoti vave kutorarama nemaricho.
Patabvunza kuti mapurasitiki avaka vakisa zvitumba zvavo vakaawana kupi, Amai Memory Magaramombe vati vakapihwa nevatyaira vedzimota hombe dzinotakura zvinhu kana kuti magonyeti.
VaKatemanyoka vanoti kunetsana papurazi apa kwakatanga muna 2018 apo VaJames Chigwedere, hama yevaimbove gurukota rezvedzidzo mushakabvu Aneas Chigwedere, vakapihwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yave yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu.
Tatadza kubata mudzviti wenzvimbo uye vari sachigaro webazi rinobatsira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu reHurungwe, VaAndrew Tizora kuti tinzwe kuti vachaita sei nemhuri idzi asezvo vange vasingadaviri nharembozha yavo.
Pakabviswa vanhu ava papurazi gore rapera, VaTizora vakaudza Studio 7 kuti vaigara zvisiri pamutemo uye vakakurudzira kuti vadzokere kwavakabva.